Chipiri, June 5, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
IAmerican Marketing Association (AMA) inotsanangura chiratidzo se zita, izwi, dhizaini, chiratidzo, kana chero chimwe chinhu chinoratidza chakanaka kana mutengesi seumwe mutengesi sewakasiyana neuwo wevamwe vatengesi.
Zvakaoma kuwana mibvunzo iri nyore: Ndiwe ani? Nei kambani yako iriko? Chii chinoita kuti usiyane nemakwikwi? Uye zvakadaro, iyo mimwe mibvunzo yakaoma kwazvo inogona kupindurwa nebhizinesi. Nechikonzero chakanaka, futi. Ivo vanorova pamoyo webhizinesi, ayo epamoyo tsika uye yepamoyo chinangwa. Uye kuvepo kwazvo mumusika wemakwikwi.
The folks at Godfrey isa pamwechete iyi inotonhorera vhidhiyo infographic pane izvo chinonzi mhando:
Unogona kudhawunirodha kopi yeiyo yakapera Branding PDF pano.
Tags: muchisobrand yakatsanangurwatsananguro yechiratidzogodfreyvhidhiyo infographicchii chinonzi brand